Malunga Nathi-Pro-Lean Technology Co., Ltd.
Fowunela iNkxaso +86 15361465580
Inkxaso ye-imeyile enquires@proleantech.com
uMdibaniso kunye nokuJika uMdibaniso
I-PROLEAN HUB sisixhobo sokuya kwiinkampani zetekhnoloji kunye neziqalo ezivelisa izixhobo ezitsha.Umbono wethu kukuba ngumboneleli okhokelayo wesisombululo kwi-On-Demand Manufacturing.Ukufezekisa oku, sisebenza nzima ukwenza ukwenziwa kube lula, ngokukhawuleza, kunye nokonga iindleko ukusuka kwiprototyping ukuya kwimveliso.
Sijika izimvo zakho zibe yimveliso ngokusebenzisa iinkqubo zethu ezilawulwa kakuhle.
Nje ukuba ube nombono omtsha,
okanye into edala.
qhagamshelana neenjineli zethu.
Ukhululekile ukuba uqhagamshelane neenjineli zethu iiyure ezingama-24 ngosuku.Baza kuvavanya ngoko nangoko ubunzima beprojekthi kwaye bakunike isindululo kunye nekoteyishini.
Emva koko linda nje iiveki ezimbalwa kwaye umbono wakho uya kuba yinyani.
Sisebenzela abathengi kwihlabathi liphela kumashishini ahlukeneyo, kubandakanyaiirobhothi, iimoto, i-aerospace, kunye nempahla epakishwe ngabathengi...
Ngokudibanisa ubuchule bothungelwano kunye nobuchule bokwenza izinto zangaphakathi, sinokunika abathengi bethu ukufikelela kumaxabiso akhawulezayo, amaxesha aqikelelweyo okukhokela, umkhondo wenkqubo yemveliso kunye nokuhlolwa okupheleleyo komgangatho.
Siyakwazi ukubonelela ngengxelo yokwenziwa ngoko nangoko kubathengi ngelixa sikwamisela ezona zisombululo zisebenzayo nezinexabiso eliphezulu zokuvelisa indawo nganye.
Amaxesha okuKhokela aqikelelweyo
Umzila weNkqubo yeMveliso
Uhlolo olupheleleyo lweDimensional
Ukuvelisa into enye
Inkqubo yethu yokuvelisa iqinisekisa ukuba abathengi bafumana isisombululo esibanzi kuyo nayiphi na imfuno.Oku kuquka iindawo ezintsonkothileyo kunye nezichanekileyo, ezifana namalungu abonayo, iindawo zemoto, izixhobo zonyango okanye iindawo ze-aerospace.
Emva kwenkqubo yokucaphula, sinikezela ngeSatifikethi seMaterial ukuze uqinisekise izinto ezifanelekileyo.Inkqubo yethu yokulawula umgangatho yenzelwe ukubeka esweni umsebenzi ngamnye, ukusuka kulungiselelo, ngemveliso, kunye nokuhanjiswa kwexesha kubathengi bethu.Ngexesha lokuhlolwa kwemveliso kwaye ilungele ukuhanjiswa, iNgxelo yoHlolo olupheleleyo lweDimensional iya kulandelwa.
Uhlaziyo lwenkqubela yeprojekthi yexesha lokwenyani
Umsebenzi wethu uyakhawuleza kwaye ucwangcisiwe!Ukususela ekunxibelelaneni kwethu kokuqala, ukuya ekuhanjisweni okukhuselekileyo kwamacandelo, sikhathalela iiprojekthi zabathengi.Sigcina abathengi behlaziywa ngobume bemveliso, sisebenzisa iProjekthi yokulandela ifom ethunyelwa kubathengi ngeveki.abathengi banokubona ngokucacileyo imeko yemveliso yeeprojekthi zabo.
Kutheni PROLEAN HUB
-Ukugcina imali ngenkqubo yethu yokwenza izinto eziyimfuneko
-Utshintsho olufutshane phakathi kokhuphiswano (kunye nezinga eliphezulu lempumelelo)
-Ukudala iinketho zoyilo olubhetyebhetye kuzo zonke iimveliso zakho
– Ukubonelela ngenketho ebanzi yokuvelisa ibhulorho
Umbono kaProlean kukuba ngumboneleli wesisombululo okhokelayo kwi-On-Demand Manufacturing.
Ezona naliti zeplastiki ezi-5 zixhaphakileyo...
Iintlobo ezi-6 zeplastiki ziyafa, ngaba uyazazi...
Ukubunjwa kwesitofu: Isishwankathelo seTekhnoloji, A...
Amanqaku oyilo kunye neendlela zokulungiselela ze...
Ukuphucula uYilo lwaMalungu eMetal Sheet...
Umnxeba: +86 15361465580
Idilesi: Isakhiwo A1, Fuhai Technology Industrial Park, Fuyong Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen
Inkqubo yokuJonga iProoess
Ilungelo lokushicilela © 2022 ProLean.Onke Amalungelo Agciniwe. Hot Products>
Iziseko zoMatshini weCnc Machining Fabrication Metal Steel Fabrication Inkonzo yokuphosa isinyithi Umatshini woMfanekiso Iisayizi zePlastiki zokubumba